Ngaphandle kwamayunithi amakhulu ezimele ezimoto ezimisa umoya opholile, ama-compressors ajwayelekile wemoto axhunywe nge-shaft enkulu yenjini ngokusebenzisa imishini yokubamba kagesi. Ukuma nokuqala kwe-compressor kunqunywa ngokudonsa nokudedelwa kwe-clutch kagesi.
12V Auto Ac Samandla For Mitsubishi Colt / MITSUBISHI LANCER / LANCER EVOLUTION X / OUTLANDER
Ukusebenza kahle kwe-volumetric ye-rotary vane compressor kuphakeme kakhulu, futhi i-Rotor ingagijima ngejubane elikhulu, ngakho-ke amandla wefriji aqinile. Izingxenye eziyinhloko ze-rotary vane compressor yi-cylinder block, i-rotor, i-axis eyinhloko, i-blade, i-valve yokukhipha, ikhava yokuphela yangemuva, ikhava yokuphela kwangaphambili nge-clutch kanye ne-axis esemqoka.
ICompressor entsha ye-AC ene-Clutch yeNissan Juke / Nissan Micra IV / Nissan Juke Nismo / Nissan Versa
Indima ye-compressor yezimoto ukucindezela ifriji ukukhulisa izinga layo lokushisa nokucindezela. Ngalesi sikhathi, izinga lokushisa kwefriji liphakeme kunezinga lokushisa eliseduze, kanti isiqandisi sipholile ngokupholisa umoya, bese izinga lokushisa liyancipha nengcindezi inciphile. Kule divayisi, izinga lokushisa kwesiqandisi liyancipha futhi ingcindezi yehla.
I-12V Auto A / C Compressor Manufacture Factory Ye-Subaru Impreza / Subaru Stella / Subaru Impreza XV
I-compressor yemoto yezimoto iyinhliziyo yohlelo lokupholisa umoya lwezimoto, oludlala indima yokucindezela nokudlulisa umusi wesiqandisi. Ama-AC compressors ahlukaniswe izinhlobo ezimbili: ukufuduka okungaguquguquki nokuguquguqukayo. Isilawuli se-air conditioning singahlukaniswa sibe yi-compressor engaguquki yokufuduka kanye ne-compressor eguquguqukayo yokuhamba ngokuya ngemigomo yokusebenza ehlukile.
Ukuhlinzekwa komkhiqizo wethu kunosayizi omncane kakhulu, umsindo osebenzayo ophansi, impilo yokusebenza ekude, ukusebenza okuhle komphumela wokusebenza kahle kokupholisa.